‘पुदिना’-रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनका र वजन कम गर्न लागि लाभदायक | Naya News Nepal
Home शिक्षा/सूचना प्रविधि ‘पुदिना’-रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनका र वजन कम गर्न लागि लाभदायक
२० जेष्ठ २०७८, बिहीबार १८:५५
काठमाडौं – जेस्ठ २०
पुदिना वजन कम गर्न र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनका लागि लाभदायक हुन्छ यो गर्मीयाम को मौसम हो । यस्तो गर्मीयाम मौसम मा जताततै पुदना पाइन्छ । पुदिनाका पातहरूमा कम क्यालोरी हुन्छ, भने प्रोटिन र राम्रो फ्याट पाइन्छ ।
पुदिनामा भिटामिन ‘ए’, ‘सी’ र ‘बी’ प्रसस्त मात्रामा पाइन्छ, जसले हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ राख्नुका साथै छालामा पनि चमक ल्याउँछ । भारतीय चर्चित आयुर्वेद विज्ञ डा. अबरार मुलतानीका अनुसार पुदिनाले रगतको पीएचलाई अम्लीय हुन दिदैन ।
जसको कारण शरीरको थकाईको समस्याबाट बचाउँछन । विशेषत हामीले पुदिनाको विभिन्न चटनी बनाए खाने गर्छौं । यसरी पुदिनाको चटनीले रोग प्रतिरोध क्षमता बढाउँछ, किनभने पुदीनालाई फलाम, पोटासियमको राम्रो स्रोत मानिन्छ । यसले मेमोरीलाई बढाउँछ र हिमोग्लोबिन सुधार गर्न मद्दत गर्दछ ।
पुदिना नियमित सेवनका फाइदाहरु…
आयुर्वेद विज्ञ डा. अबरार मुल्तानीका अनुसार पुदिनाको चटनीलाई डाइटमा समावेश गर्दा वजन कम गर्न सहयोग पुग्छ । पेपरमिन्टले पाचन एन्जाइमहरूलाई उत्तेजित गर्ने काम गर्छ, जसले खानाबाट पोषक तत्वहरूको राम्रो शोषण गर्न मद्दत गर्दछ । राम्रो चयापचयले वजन घटाउन मद्दत गर्दछ । यस्तो अवस्थामा पुदिनाको चटनी धेरै उपयोगी हुन सक्छ ।
यदि तपाईको मांसपेशीहरु दुखिरहेको छ भने तपाईको खानामा पुदिनाको चटनी समावेश गर्नुहोस् । किनकि यसले साधारण टाउको सजिलैसँग निको पार्दछ । पुदिनाको कडा र ताजा गन्धले टाउको दुखाइ कम गर्न मद्दत गर्दछ ।
पुदिनाको चटनीले रोग प्रतिरोध क्षमता बढाउँछ र शरीरलाई थुप्रै रोगबाट टाढा राख्छ ।
#nayanewsnepal #corona #helth
Previous articleमार्स रोवर पर्सिवियरेन्सले सय दिनभित्र लिएको मंगल ग्रह को फोटोहरु…
Next articleआज बाट उपत्यकामा निषेधाज्ञा खुकुलो – कुन समय मा के के खुल्दै छ ?
कोरोना को उद्गमस्थल चीनलाई पनि उछिन्यो नेपाल ले कोरोना भाइरस : कोभिड बाट मृत्यु हुनेमा
पोखरीमा डुबेर २ जना बालक को ‘मृत्यु’